PressReader - Ilanga: 2017-10-02 - BALWA NESIHLAVA SOKUBULAWA KWABAYIZIPHIWO
BALWA NESIHLAVA SOKUBULAWA KWABAYIZIPHIWO
Ilanga - 2017-10-02 - Izindaba - ALUTA MBELE
UKHALE ngokwehla kwesithunzi sabelaphi bendabuko ngenxa yobuzimuzimu obubikwayo KwaZulu-Natal - abantu bedla abanye - nesihlava sokubulawa kwabanebala elimhlophe ngoba kuthiwa kuzokwenziwa amakhathakhatha umelaphi oqale ukuhamba le nyathuko eneminyaka eli-12 ubudala.
UMnu Thengindoda Mkhize (62), waKwaMaphumulo, enyakathompumalanga yeKwaZulu-Natal, ukusho lokhu emashini ebihlelwe wuMasipala waKwaDukuza ngokubambisana neTraditional Healers Organazation for Africa (THO) ngoMgqibelo njengoba bekusongwa inyanga yabanebala elimhlophe (uMandulo).
Inhloso yale mashi esuke eSadtu Park ilibhekise KwaDukuza Town Hall, bekuwukulwa nesihlava sokubulawa kwabanebala elimhlophe njengoba iningi likholwa wukuthi kuthakwa umuthi wokuceba ngabo. UMnu Mkhize uthi uhulumeni kumele ungenelele ukuze kulwiwe le mpi abanebala elimhlophe bangaze baphele.
“Kungaba ngcono uma uhulumeni ungaphakamisa izinyawo ngoba kuyonakala, sibonile ukuthi abanebala elimhlophe bebebulawiswa okwezimpukane. Ngeke wenze umuthi ngomunye umuntu, lokho kusho ukuthi usuke ungeyena ngempela umelaphi. Sidinga ukwesekwa wuhulumeni emkhankasweni wokulwa nokubulawa kwabo,” kusho Mkhize. Ukhale ngabagcwele kwabezindaba kuthiwa badla abanye wathi umkhuba wabo usehlisile isithunzi sabelaphi bendabuko eNingizimu Afrika.
UMnu Mkhize ukhuluma kanjena nje, ngoNcwaba (August) kunowesilisa ozinikele emaphoyiseni ase-Estcourt, maphakathi neKwaZulu-Natal ethi ukhathele wukudla inyama yabantu. Uboshiwe. Lokho kuholele ekuboshweni kwabanye okukhona nomelaphi wendabuko kubona.
Okwabanebala elimhlophe sekunezigigaba eziningi njengoba ngoNcwaba wezi-2015 kubulawe uNkz Thandazile Mpunzi kuhloswe wona umhlola wokuba acwiywe ukuze kwakhiwe umuthi. Ngowezi-2016, kusize uMnu James “Godolulalamankankane” Mthembu oyinyanga yodumo KwaMhlabuyalingana ukuze kuboshwe owesifazane obethengisa ngezingane ezintathu ezinebala elimhlophe.
ISITHOMBE NGU: ALUTA MBELE
BEBEPHUME ngobuningi babo abelaphi bendabuko behlangene nabanebala elimhlophe kumashelwa ukubulawa kwabo ngenhloso yokwenza umuthi.